Warning: getimagesize(article_uploaded_files/7412akoirala.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home4/b1soft/public_html/nepalkoreanews.com/page.php on line 154
धुलिखेलको सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएका वरिष्ठ सर्जन रामकण्ठ माकजु नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामान्य चासो राख्नेका लागि पनि आदरणीय नाम हो । १६ वर्षअघि अष्ट्रियाको अन्तर्राष्ट्रिय फोराल्वर्ग सिटी अस्पतालमा सर्जनको आकर्षक पद र आम्दानी छाडेर नेपाल फर्किएका रामकण्ठले आफ्नो थाकथलोमा विश्व स्वास्थ्य संघठनले निर्धारण गरेको युरोपेली मापदण्डको अस्पताल बनाएका छन् । करिब १ सय ४८ रोपनीमा फै लिएको उक्त अस्पताल कुनै त्यस्तो सेवाबाट अछुतो छैन, जुन राजधानीका प्रमुख अस्पतालले उपलब्ध गराउँछन् । करिब ३ सय ६० शय्याको यो अस्पतालले काठमाडौं विश्वविद्यालयको मेडिकल साइन्ससँग सम्बन्धित सबै विषयका सहायक एवं विशेषज्ञहरू पनि उत्पादन गर्दै आएको छ । यो एउटै अस्पतालले नेपालका दुर्गम गाउँमा स्वास्थ्य केन्द्र पनि स्थापना गरेको छ, जसमा यही अस्पतालका विशेषज्ञ एवं इन्टर्न चिकित्सकहरूबाट स्वास्थ्य सेवा पनि प्रदान गर्छ । अध्यापन एवं चिकित्सकीय सेवा दिइरहेको यो अस्पतालले आफ्नो कार्यलाई विस्तार दिँदै मेडिकल अनुसन्धानको काम पनि गरिरहेको छ । तातोपानीमा सुत्केरी गराउने जस्ता दर्जनौं नवीनतम प्रविधि नेपालमा भित्र्याएका कारण यसले केही अन्तरार् ष्ट्रिय पुरस्कार पनि प्राप्त गरेको छ ।
प्रा.डा.रामकण्ठ माकजु, निर्देशक, धुलिखेल अस्पताल १५ वर्षअघि दुई कोठामा स्वास्थ्य सेवा प्रारम्भ गर्दा धुलिखेल अस्पताल यो रूपमा आउला भन्ने कल्पना गर्नुभएको थियो ?
इन्जिनियरले नक्सा नकोरी भव्य भवन बन्न सक्ला ? युरोपको प्रगति कसरी भयो ? आज जे सम्भव देखिएको छ, त्यसको योजना बुनिएको थियो कि थिएन भन्ने कुरा बुझेपछि यो प्रश्न गौण हुन्छ । तपाईं जुन काम प्रारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहीबेला त्यो कहाँसम्म पुर्‍याउँछु भन्ने सोच्नुहुन्छ, त्यो त्यहीँ पुग्छ । तपाईर्ं धुलिखेल अस्प्ातालको यो रूपलाई धेरै ठूलो देखिरहनु भएको छ । यो साच्च्ौ नै आम मानिसले कल्पना गर्ने अस्पतालभन्दा भन्दा फरक छ । यसको अर्थ यसको परिधि यति मात्र हो भन्ने होइन ।
धुलिखेल ठूलो स्थान होइन, तर तपाईंको अस्पतालको कल्पना र योजना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका छन्, यस्तो काम त राजधानीमै गर्नुपर्ने होइन र ?
राजधानीमा सरकारले पनि आफ्नो ठूलो संयन्त्र लगाएकै छ । प्राइभेट अस्पतालहरू पनि त्यहीँ व्यवसाय गरिरहेकै छन् । यदि म सेवा गर्छु भनेर त्यही थुपि्रने हो भने त्यो सेवा हुनेछैन । सेवा गर्न त गाउँमा पो जानुपर्छ । मैले मेरो गाउँको छेऊमा यो अस्पताल खोलें । मेरा बुवालाई यहीँ अप्रेसन गरेर बचाएँ । राजधानी पुर्‍याउन नभ्याउने, आर्थिक अवस्थ्ाा नाजुक भएका यताका जनतालाई एउटै स्थानमा सबै सेवा दिएँ भने पो मैले सेवा गरेको ठहरिन्छ । सेवा गरें भन्नुु र सा ँच्चै महसुस हुने गरी सेवा गर्नु फरक कुरा हुन् ।
तैपनि सानो स्थानमा ठूलो कामको आँट गर्नु ....?
प्राचीनकालदेखि नै धुलिखेल पूर्वी पहाड तथा तराईको संगम स्थल थियो । बीपी राजमार्ग बनेपछि पूर्वी तराईसँग यसको नाता अझै गहिरिएको छ । धुलिखेल अस्पतालले पूर्वका पहाड र तराई दुवै क्षेत्रलाई समेटेको छ । त्यसैले पनि यहाँ वाषिर्क १० हजारभन्दा बढी अप्रेसन हुन्छ । दुई हजारले प्रसूति सेवा गराउन थालेका छन् । करिब डेढ लाखले वाहिरंग सेवा लिइरहेका छन् । त्यसैले यो सानो क्षेत्र होइन । फेरि ठूलो काम गर्न ठूलै ठाउँ चाहिन्छ भन्नु अज्ञनता हो । राम्रो गरेपछि सानो स्थान पनि ठूलो हुन्छ । राजधानीका मानिस पनि यहाँ उपचार गर्न आउनु यसैको प्रमाण हो ।
बाटोको अभावका कारण गाउँमा एम्बुलेन्स पुग्दैन, उनीहरूलाई कसरी सेवा दिनुहुन्छ ?
यो मेरो पनि चिन्ताको विषय थियो । अब त्यो चिन्ता हटेको छ । अब बिरामी डाक्टरकहाँ होइन, डाक्टर बिरामीको घरमा जानुपर्छ । यसका लागि धुलिखेल अस्पतालको सेवा आवश्यक मानिएको गाउँमा एउटा स्वास्थ्य केन्द्र बनाइन्छ । त्यसमा हाम्रा इन्टर्न डाक्टर, सक्षम नर्स एवं स्वास्थ्य सहयकहरू बस्छन् । महिनामा एकपटक विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली ती स्वास्थ्य चौकीमा पुग्छन् । कुन दिन कुन रोगका विशेषज्ञ त्यहाँ पुग्छन्, त्यसको सूचना अगावै दिइन्छ । थप उपचारको आवश्यकता भए उनीहरूले नै धुलिखेल लिएर आउँछन् । अहिलेसम्म रामेछाप, काभे्र, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, सोलुखुम्बु, गोरखा जिल्लाका १७ गाउँमा यस्ता स्वास्थ्य केन्द्र खोलिइसकेका छन् । यसलाई दुर्गम जिल्लाका सबैतिर विस्तार गर्ने योजना छ ।
धुलिखेल अस्पतालको भव्यता एवं यसको मेसिनरीमा करोडौं खर्च लागेको देखिन्छ । त्यसमा पनि गाउँ-गाउँमा स्व्ाास्थ्य केन्द्रहरूको स्थापनाले खर्च बढेको छ, यत्रो रकम कहाँबाट प्राप्त हुन्छ ?
तपाईं राम्रो काम गर्छु भनेर लाग्नुहोस्, सहयोग गर्ने हातहरू जताततै भेट्नुहुन्छ । आजभन्दा १५ वर्षअघि यो स्थान स्याल कुध्ने डाँडा थियो, मानिसहरू एक्लै आउन सक्दैनथे, तर तपाईंसँग साँच्चै नै सपना छ, त्यसलाई पूरा गर्ने आँट, विश्वास एवं लगनशीलता छ भने सबैले सहयोग गर्छन् । धुलिखेलका जनता, स्थानीय निकाय एवं देश र विदेशका सहयोगी हातहरूले नै धुलिखेल अस्पताल यहाँसम्म आइपुगेको हो । यद्यपि यो काम कल्पना गरेजस्तो सजिलो थिएन । यस्तो काम गर्न हृदयमा इमानदारी र काँधमा जिम्मेवारी बोकेर हिँड्नुपर्छ । एक शब्द, एक पाइला एवं एक योजना पनि यताउति भैदियो भने सम्झनुहोस्, ठूलो कुरा बन्दाबन्दै भत्कन सक्छ ।
तपाईं पनि आम नेपाली जस्तै पारिवारिक मान्छे, यति धेरै शक्ति र समय कसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ ?
हो म एक अष्ट्रियन श्रीमती र एउटी छोरीको पीता हुँ । सर्जनको नाताले मेरो काम रोगीहरूको अप्रेसन गर्नु हो । किनभने यी मेरा हात भगवान्ले यसकारणले कौसलयुक्त बनाइदिए, ताकि म सरल रूपमा रोगीको अप्रेसन गर्न सकौं । तपाईं एउटा परिवारको मात्र अभिभावक हुने कि सारा नेपालीको अभिभावक हुने ? सबैको परिवार चाहन्छ, मेरा अभिभावकलाई सबैले माया र सम्मान गरुन् । यदि असल काम गर्न तपाईं सँग स्पष्ट भिजन छ भने तपाईंलाई परिवारले पनि साथ दिन्छन् । ईश्वरले शक्ति दिन्छन् । श्रीमती र छोरी मात्र होइन, यो अस्पतालमा काम गर्ने ५ सय ५० व्यक्ति मेरा परिवार हुन् । यी सबैको सहयोग र मायाले मलाई सघाइरहेको छ ।
अस्पतालको स्वरुप बढ्दै जाँदा तपाईंले आफूलाई कसरी परिवर्तन गर्दै आउनु भएको छ, किनभने हिजोको रामकण्ठ र आजको रामकण्ठमा धेरै परिवर्तन आइसक्यो, होइन ?
छैन, म सधैं ४ बजे उठिसक्छु । एक घन्टा शारीरिक एवं मानसिक व्यायाम गर्छु । किनभने लामो एवं स्वास्थ्य जीवन बाँच्न व्यायाम आवश्यक छ । साढे सातबजेसम्म घरमा नास्ता गरेर ८ बजेसम्म अस्पताल आइसक्छु । ठीक ८ बजे सबै विभागका प्रमुखसँग दिनभरि गर्ने कामको मिटिङ हुन्छ । ९ देखि ११ बजेसम्म अस्पतालमा बिरामीको रिपोटिङ लिने काम हुन्छ । ११ बजेपछि म त्यस दिन गर्ने सबै अप्रेसन सक्छु । त्यसपछि अस्पताल हातामै रहेको संयुक्त क्यान्टिनमा खाना खान्छु । खानापछि दिनभरि प्रशासनिक काम गर्छु । साँझदेखि घरपुग्नु अघिसम्म दाता, शुभचिन्तक एवं विशेषज्ञहरूसँग भेटघाट गर्छु । घर पुग्दा नौ बज्छ । १५ वर्षदेखि यो रुटिन परिवर्तन भएको छैन । मैले जीवन बुझेयता आफ्ना लागि बाँचेको थाहा छैन ।
मानिसहरू के भन्छन् भने नेपालमा एक सय जना रामकण्ठ जस्तो इमान्दार व्यक्ति हुने हो भने दश वर्षमा देशले मुहार फेर्छ ?
गाउँघरका सबैजसो मानिस इमान्दार नै छन् । म यो देश नेताले विगारे भन्ने पक्षमा पनि छैन, तर मान्छे पनि पशु जस्तो यो साढे पाँच मिटर आन्द्रा भर्न रातदिन चिन्ता लिन्छ, राम्रो नराम्रो काम गर्छ । ए बाबा, यो साढे पाँच मिटर आन्द्राको चिन्ता छाडिदेऊ । आफ्नो ड्युटि राम्रोसँग गर । त्यसले तिमीलाई पेट भर्ने खाना मात्र होइन, नाम र दाम पनि दिन्छ । सबैले आफ्नो ड्युटि जुन दिनदेखि पूरा गर्न थाल्छन्, देश बन्न बेर लाग्दैन । नेपालमा केही हुँदैन भन्नेहरूले एकपटक मलाई भेटून् ।
कहिलेकहीँ आफ्नी छोरीलाई धुलिखेलको सामान्य स्कुलमा पढाउनु परेको वा अष्ट्रियन श्रीमतीलाई समय दिन नसकेकामा दुःख लाग्दैन ?
यो मैले रोजेको बाटो हो । पैसाका लागि काम गरेको भए म नेपाल र्फकन्नथेँ । यो कुरा श्रीमतीले पनि बुझेकी छिन् । म यहीँको विद्यालय पढेर चिकित्सक भएँ । यसको अर्थ मेरी छोरी पनि यहीं पढेर मजस्तै सक्षम हुन सक्छिन् भन्ने हो । हामी सबैले आफूसँग भएका कुराको सम्मान गर्न जान्नुपर्छ ।
निकै गम्भीर कुरा गर्नुभयो, व्यस्तताकाबीच पनि यी ज्ञान कहाँबाट पाउनु हुन्छ ?
प्रकृति ज्ञानको स्रोत हो । तपाईं चरालाई हेर्नुस्, रूखलाई हेर्नुहोस्, खोला-नालालाई हेर्नुहोस् । ग्रामीण जनतालाई हेर्नुहोस् । सबैबाट ज्ञान पाउन सक्नुहुन्छ । तपाईंको हेर्ने दृष्टिकोण सही हुनुपर्छ । आहा संसार कति रमाइलो छ, तर त्यो रमाइलो बुझ्ने आँखा हुनुपर्छ । मानिस सबैथोक पाएर पनि दुःखी छ । नेपालीमा उखान छ नि, किन चाउरिस मरिच, आफ्नै पीरले ।
आश्विनी कोईराला इकान्तिपुर